June 17, 2020 - PARIJATMEDIA
सर्लाही सीमाक्षेत्र’को सकस : जमीन नेपाल’को, मालिक भारतको !
२ असार, सर्लाही । नेपालले भारतीय सी’माक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको गतिविधि बढाएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सुरक्षा गस्ती बढेसँगै सीमा क्षेत्रका अनेक र’हस्य सतहमा आउन थालेका छन् । यही क्रममा शुक्रबार बिहान सर्लाही जिल्लाको पर्सा गाउँपालिका–३ स्थित नारायणपुरमा ह’ताह’तीको घ’टना भयो । यो घ’टनाले के उजागर गरिदिएको छ भने सीमा क्षेत्रमा सैयौं बिघा नेपाली जमीनको मालिक भारतीयहरु रहेछन्, जसले नेपाली भूमिमा बाँस र आप रोपेका रहेछन् । सायद, यही कारणले पनि भनिएको होला, नेपाल–भारतवीचको सम्बन्ध रोटी र बेटीको सम्बन्ध हो । शुक्रबार नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको भारतीय समूहसँग त’नाव बढ्दै जाँदा नेपाली सुरक्षाकर्मीले प्र’हार गरेको गो’ली लागेर एक भारतीयको मृ’त्यु भयो । तीनजना भारतीय घा’इते भए । एकजना भारतीय प’क्राउ परे । केही नेपाली सुरक्षाकर्मी ढुंगाले लागेर सामान्य घा’इते भए । घ’टनापछि अहिले त्यस क्षेत्रमा
पैसा’लाई कसरी बनाउ’ने संक्रमणरहित ?
काठमाडौं : के तपाईलाई थाहा छ? पैसाबाट कोरोना भाइरस सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। पैसा नभए हाम्रो घर व्यवहार चल्दैन। जहाँ जानुस् पैसा छैन भने कुनै काम बन्दैन। तर हामीले ख्याल गर्नैपर्छ कि पैसाबाट पनि विभिन्न सङ्क्रमण फैलिने गर्छन्। दैनिकरुपमा प्रयोग गर्ने पैसा हामीले सोंचेभन्दा बढी फोहर हुन्छ। एउटा नोटमा सयौँ किसिमका ब्याक्टेरिया, फङ्गस तथा भाइरस हुन्छन। पैसा अन्यन्तै क्रियाशील हुने र जसको हातमा पनि पुग्ने भएकाले पैसा विभिन्न रोगको संवाहक हुनसक्छ। कागज तथा कटनको नोटमा भन्दा पोलिमर नोटमा जीवाणु कम समय रहन्छन्। नोटभन्दा ‘क्वाइन’मा भाइरस तथा ब्याक्टेरिया धेरै समय रहन्छ। नोटमा दुई दिनसम्म र क्वाइनमा लामो समयसम्म भाइरस रहन सक्छ। स्विस अध्ययनले पैसामा १२ दिनसम्म जीवाणु रहनसक्ने बताएको छ। क्यासको विकल्पका रुपमा कार्ड प्रयोग गरिने अभ्यास छ। कार्ड पनि सङ्क्रमित हुनसक्छ। पैसाका माध्यमबाट कोभिड–१९
अविवाहित भन्दा विवाहित युवतीत’र्फ किन आकर्षित हुन्छन् पुरुष*
धेरै युवा विवाहित महिलातर्फ आकर्षित हुने गरेका कैयाै उदाहरण त हामीले सुनिरहेका हुन्छाै । पछिल्लो समय भएको एक अनुसन्धानले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । शोधमा यसको पछिको कारण पनि बताइएको छ आखिर पुरुषलाई विवाह गरेको महिला अन्य युवतीको तुलनामा किन आकर्षक लाग्छ ? युवाले विवाहित महिलसँग किन नजिकन चाहान्छन् ? त्यसका केही कारण यस्ता छन्। हेरचाह विवाह गरेका महिलाले अविबाहितका तुनलामा पार्टनरको धेरै हेरचाह गर्छन् । युवालाई युवतीको यस्तो हेरचाह विशेष मन पर्छ। हर्मोनमा परिवर्तन विवाह पछि महिलाको हर्मोनमा परिवर्तन आउँछ । यसका कारण उनीहरुको छालामा चमक आउँछ । महिलामा आएको यस्तो परिवर्तनले पुरुषलाई आकर्षित गर्छ। आत्मविश्वास विवाह गरेका महिला विवाह नगरेका युवतीको तुलनामा अधिक आत्मविश्वासी हुन्छन् । उनीहरुको यही आत्मविश्वासका कारण अविवाहित युवा आकर्षित हुन्छन् । पुरुषहरुलाई विवाहित मह
प्रधानसेना’पति थापा र सशस्त्र’का आईजीपी खनाल कालापानीमा
दार्चुला : नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी शैलेन्द्र खनाल कालापानी निरीक्षणमा आएका छन्। बुधबार नेपाल भारत सीमा ब्यास क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमणमा आएका हुन्। उनीहरुसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम सुवेदी, सशस्त्रका डीआईजी हरिशंकर बुढाथोकी, सुदूरपश्मि पृतिना पति निर्मलकुमार थापा उपरथी पनि पुगेका थिए। उनीसँगै नेपाली सेनाका सहायक रथी सहदेब खडका पनि बुधबार सेनाको स्काई ट्रकमार्फत् दार्चुला पुगेका छन‍्। केही दिन अघि सशस्त्र प्रहरीले स्थापनाको गरेको कालापानीको छाङ्गुर बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी)को निरीक्षण र दार्चुला तिङ्कर सडकखण्डको अनुगमन गरेर फर्किएका छन्। नेपाल सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालको नक्सामा समेटेको र निशान छापसमेत संशोधन गरेसँगै उच्च सुरक्षा अधिकारीको टोलीले ब
सर्वाङ्ग नाङ्गै हिँड्न पा’इने तर मास्क ल’गाउनै पर्ने !
युरोपे'ली देश चेक रिपब्लिकमा* पुरै कपडा नलगाइ हिड्नु न्यू’डिस्टहरु हुन्छन् तर अब त्यहाँको सरकारले नां’गै हिड्नेहरूला*पनि मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ । कोरोनाभाइरसको जारी संक्र’मणका कारण यहाँ ना’ङगै हिँड्ने न्यू’डिस्टहरुलाई पनि मास्क अनिवार्य गरिएको हो । त्यहाँको कानुन अनुसार केही तोकिएका सार्वजनिक स्थलमा ना’ङ्गै हिँड्न पाइन्छ तर कोरोनाभाइरस प्र’कोपका कारण ना’ङ्गै हिँड्न पाइए पनि मास्क नलगाइ घरबाहिर हिँड्न भने पाइने छैन । देशले कोरोनाभा’इरस संक्र’मण फैलिन नदिनको लागि मास्क लगाउनै पर्ने कडा नियम बनाएको छ । पूर्वी प्रागमा पुलिसले केही न्यूडिस्टहरुलाई ना’ङगै तथा मास्क नलगाइ रमाइलो गरिरहेको भेटेपछि पुलिसले एक वक्तव्य नै जारी गर्दै अनिवार्य मास्क लगाउन निर्देशन दिएको छ । मार्च २७ मा जारी गरिएको वक्तव्यमा*भनिएको छ ‘सनबाथ लिनको लागि नागरिकहरु ठूलो समूहमा न’ग्न रूपमा जम्मा भएको तर केहीले
हुन् नयाँ विद्युत् मह’सुल दर’मा भए’का मुख्य परिवर्तन।
काठमाडौँ : विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ विद्युत् महसुल दर प्रस्ताव गरेसँगै मासिक न्यूनतम १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क भएको छ। दश युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकको विद्युत् महसुल अधिकतम १० प्रतिशतसम्म घटाइएको छ। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महशुल खारेज गरिएको छ। औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकको करिब ६५ प्रतिशतसम्म महसुल कम हुनेछ। सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहकको डिमाण्ड शुल्क पूर्णरुपले हटाइएको छ भने सामुदायिक खानेपानी ग्राहकको इनर्जी शुल्क पाँच रुपैयाँ २० पैसाबाट चार रुपैयाँ २० कायम गरिएको छ। ११ केभीका सामुदायिक खानेपानी ग्राहकको महसुल रातिको समयमा तीन रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरिएको छ। यसबाट औशत खानेपानी ग्राहकको महशुल ४० देखि ५० प्रतिशत कम हुने बताइएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन
उपल्लो मुस्ताङ’को स्कुलमा तोडफोड
जोमसोम : उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका-२ छोसेरमा अवस्थित एकमात्र उच्च तहको दिव्यदिप माध्यमिक विद्यालयमा अज्ञात समूहले तोडफोड गरेका छन्। घुम्ती कक्षा सञ्चालनका लागि पोखरा झरेको उक्त विद्यालय गत कार्तिक महिनादेखि पूर्ण रुपमा बन्द थियो। हालै विद्यालयको कम्पाउण्ड वाल स्तरोन्नती गर्ने क्रममा विद्यालय तोडफोडको अवस्थामा पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। गत कार्तिक महिनामा घुम्ती कक्षाका लागि पोखरा झरेको उक्त विद्यालय बैशाख महिनामा साविककै स्थानमा सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन गरेसँगै लामो समयदेखि पठनपाठन बन्द थियो। लकडाउनसँगै विद्यालय पूर्व निर्धारित समयमा खुल्न सकेको थिएन। उक्त विद्यालय मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाकादेखि दक्षिण १० किलोमिटर यता पर्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्त
काठमाडौं। केही दिनदेखि त’नाव उत्पन्न भएको सीमा क्षेत्र लद्दाखमा भएको भिड’न्तमा भारतले ठूलो क्षे.ति बेहोर्नु परेको छ । भारतीय सैनिक जबर’जस्त सीमा पार गर्न खोजेपछि भएको भिड’न्तमा २० भारतीय सेनाको मृ’त्यु भएको छ । लद्दाखको गलवान घाटीमा भएको भि’डन्तमा एक कमाण्डरसहित तीनको घट’नास्थलमै मृ’त्यु भएको थियो भने घाइते अवस्थामा रहेका १७ जनाको उपचा’र नपाएर मृ’त्यु भएको छ । अन्य करिब २० जना बेप’त्ता छन् । उनीहरुको पनि मृ’त्यु भएको हुन सक्ने बताइएको छ । भि’ड’न्त भएको क्षेत्र चीनको नियन्त्र’णमा रहेको छ। भारतीय सेनाले मंगलबार राति अबेर विज्ञप्ति निकालेरै आफ्नो क्षतिबारे स्वीकार गर्दै चीनतिर पनि हता.हती भएको दाबी गरेको छ । भारती सेनाले घाइ’ते १७ जनाको शून्य डिग्रीभन्दा कम तापक्रम र धेरै उचाई भएकोले मृ’त्यु भएको बताएको छ। चिनियाँ सेनाले भारत जबर.जस्ती सीमा रेखा पार गरेपछि आफूहरुले कार.वाही गरेको बताएक
काठमाण्डौ – मलेसियामा कोरोना सङ्क्रमित नेपाली श्रमिक सबैजना निको भएको दावी गरिएको छ । मलेसियामा अहिलेसम्म ८१ जना नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको र उनीहरुमध्ये सबैजसो निको भएको मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव महेश त्रिपाठीले बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार दुई हप्ताअघि नै सङ्क्रमित ८१ मध्ये ४८ जना पूर्ण रुपमा निको भएको र ३३ जना निको हुने चरण थिए । पछिल्लो दुई हप्तामा कुनै कोही पनि नयाँ सङ्क्रमित नभएको र निको हुने चरणमा रहेका ३३ जना पनि निको भएको द्वितीय सचिव त्रिपाठीले दावी गर्नुभयो । ‘यहाँ अहिले अवस्थामा सुधार आइसकेको छ, दुई हप्ताअघि ३३ जना निको हुने चरणमा हुनुहुन्थ्यो,’ द्वितीय सचिव त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘हामीलाई निको हुनेका तथ्याँक औपचारिक रुपमा प्राप्त हुँदैन, तर पनि उहाँहरु पनि निको भइसक्नुभएको छ ।’मलेसियामा सुरुवाती चरणमा कोरोना सङ्क्रमण छिटोछिटो बढ्दा नेपाली श्रमिक पनि त्यस
“ढुकढुकी बढाउने गिजेलको ‘कामुक’ अवतार,(हेर्नुहोस् ९ तस्बिर)
अमेरिकी मोडल किम कार्दसियनकी भारतीय संस्करण मानिने बलिउड अभिनेत्री गिजेल ठकरालका ह’ट एन्ड बो’ल्ड तस्बिर सर्वाधिक चर्चामा रहेका छन् । रियालिटी टिभी सो ‘बिग बोस ९’ मा सहभागी हुँदा पनि उनले आफ्ना ग्ल्याम’रस तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेर चर्चामा आएकी थिइन । बलिउडको ‘मस्तीजादे’ फिल्ममा पनि आफ्नो सौन्दर्य प्रदर्शन गरिसकेकी उनी फेरि पछिल्ला तस्बिरले चर्चामा छाएकी हुन् । सेतो रिभिलिङ टप र ब्ल्यु जिन्समा अत्यधिक ह*ट देखिएकी छन् । हेर्दा ठ्याक्कै उस्तैं दखिने गिजेल र किम लाई कसैंले सहजैं छुट्याउन सक्दैन् । हामिले सामाजिक संजलबाट उनका निकै ह’ट तस्बिर लिएका छाैँ, हेराैँ उनका कामु’क तस्बिर